Subsidy for Supreme Staff
CSR & Environment /Employee Welfare /
In the current spread of COVID-19, there are various difficulties being faced in different countries and sectors. While working hard for the citizens, we have also supplied over 400 junior staff with rice, oil and logistics cost as crisis support on April 3, 2020. The management committee led by our department heads are creating and implementing health-related policies and plans for the crisis response as well as business continuity plans.
Covid-19 ဖြစ်ပေါ်ပြန့်ပွါးနေသည့်ကာလတွင် နိူင်ငံအသီးသီး၊နယ်ပယ် /ကဏ္ဌအသီးသီး၌ခက်ခဲမှုနှင့်အဆင်မပြေမှုများရင်ဆိုင်နေရပါသည်။
ပြည်သူအများအတွက်ကြိုးစားနေရင်းမိမိတို့ကုမ္ပဏီများ၏ဝန်ထမ်းငယ်များနှင့်အရာရှိငယ်များအား အရေးပေါ်ကာလပံ့ပိုးမှုအဖြစ် ဆန်နှင့်ဆီများ၊ Logistics Cost တို့ကိုဝန်ထမ်း ၄၀၀ ကျော်အတွက် ၂၀၂၀ခုနှစ် ဧပြီလ ၃ ရက်၌ ပံ့ပိုးမျှဝေခဲ့ပါသည်။
ဝန်ထမ်းများအတွက်အရေးပေါ်ကာလအတွင်းကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကာကွယ်မှုနှင့်စောင့်ရှောက်ပံ့ပိုးမှု ဆိုင်ရာ Policy နှင့်အစီအမံများ ၊ Business Continuity Plan များကို ဌာနခေါင်းဆောင်များဦးဆောင်သည့်Management Committee မှပူးပေါင်းရေးဆွဲ၊ ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်လျှက်ရှိပါသည်။